Home » Vaovao momba ny dia any Eropa » Notetezin'ny Repoblika Tseky ny fandraràn'ny dia an'i Alemana, Hongria ary Aotrisy
Nanambara ny praiminisitra Czech Andrej Babis androany fa aorian'ny fanokafana ny sisintany miaraka amin'i Slowakia omaly dia hamarana ny fameperana fivezivezena ho an'i Alemana, Hongria ary Austria i Repoblika Czech. Nilaza ny minisitra fa ny fanesorana ireo fameperana dia ao anatin'ny drafitry ny governemanta Czech hamela ny fivezivezena malalaka amin'ny ankamaroan'ny firenena eropeana manomboka amin'ny 15 Jona.
"Manantena aho fa hatramin'ny misasakalina rahampitso dia hafahana amin'ireo firenena ireo ny dia," hoy i CTK nanonona an'i Babis nandritra ny dia nataony tany Karlovy Vary. Hivory ny governemanta amin'ny famotsorana ny dia amin'ny zoma maraina, hoy i Babis.
Austria, izay mizara sisintany miaraka amin'ny Czechs, dia nisokatra ho an'ny mpifanila vodirindrina rehetra ankoatran'i Italia, ary i Jerman dia hampidina ny fameperana sisintany amin'ny 15 Jona.
Ny Czechs dia mikasa ny hamela fidirana avy amin'ny fanjakana eropeana mihoatra ny 20 ihany koa amin'ny 15 Jona. Na izany aza, ny mpitsidika tonga avy amin'ny toerana mbola matanjaka ny valan'aretina dia tsy maintsy manome fitsapana miiba amin'ny coronavirus na hijanona ao amin'ny karantina.